Si sahlan oo bilaash ah sawir leh oo la soco Deleted.bg - Talooyin - TELES RELAY
ACCUEIL » QODOBO »Si sahal ah oo bilaash ah sawir qaad leh Delicious.bg - Talooyin
Uma baahna inaad noqoto khabiir garaaf leh in dalagga sheyga ku yaal sawir. Iyadoo la adeegsanaayo shabakada internetka, dhowr fure ayaa ku filan si loo dhamaystiro qalliinka dhawr ilbidhiqsi. Iyo bilaash!
Waa maxay xoqista?
Le timmaha - in aan lagu khaldin dalagga - waa hab garaaf ah la takooro ama ay ka saareen element ah on image ah, waxaa laga yaabaa in wajiga qofka, xoolaha, gaadiidka, warshad, shay, ee gaaban, wax kasta oo ay "uga dhammaatay", taas oo ah in la yidhaahdo dusha la qeexay. Guud ahaan, waxaa la fuliyay in ay element ku go'doonsan ku saabsan asalka dhexdhexaad ah - sida loo sameeyaa in lagu soo bandhigo "si sax ah" wax soo saarka ee buugga ama calaamad, tusaale ahaan - ama in la sameeyo Montage ah, keenidda element in image kale. Sidaasay u qabata tricks, bedelay waji kale ama adigoo qof ama shay ee macnaha kala duwan, kala duwan oo ka soo bixiyey meeshii photo asalka ah la qaatay - farsamo ah loo isticmaalo in advertising gaar ahaan.
Asalka asalka sawir-qaadashada, clipping ayaa gacanta lagu sameeyay iyada oo la jarayo sawir sawir leh. Si aan loo baahnayn in la yiraahdo, waxay ahayd lagama maarmaan in la taxaddaro iyo bukaanka ... Dijital ayaa yimid si loo fududeeyo qaliinka. Laakiin wali way ku adkaataa, xitaa haddii software gaar ah sida Photoshop ou Gimp (U dhiganta Free) haystaan ​​qalab gaar ah, mararka qaarkood hawlo si toos ah iyo waa in aan sidoo kale xiri dhowr lakab manipulations halmar isla (eeg Casharrada kala duwan oo ku saabsan mowduucan qaybta Practice our). Marka la soo koobo, pro shaqada ah, si loo qoondeeyo khubaro.
Raadinta internetka ee joornaalada
Kuwa kale, taas oo loogu talagalay dadka badankood, gaar ahaan kuwa aan awoodi karin inay iibsadaan King's Photoshop, waxaa jira xalal badan oo fudud, gaar ahaan xalalka. online, taas oo inta badan u baahan tahay internetka. Xaqiiqdii, bogag badan waxay bixiyaan adeegyo cilladaysan oo caawinaya ama caawinaya, adeegyo loo isticmaali karo fudud shabakadda internetka, kombiyuutarka - wax dhib ah ma leh nidaamka hawlgalka -, kiniin ama casriga ah.
Qaarkood, sida Clipping Magic qabtaan shaqadan lacag. Hase yeeshee, nidaamyadoodu waxay xiiseeyaan kaliya shaqada caadiga ah, iyo shirkadaha kaliya ee danaynaya.
Wixii baahi marmar ah, waxaa fiican inaad u jeedsatid goobo lacag la'aan ah, sida kuwa aadka u fiican Removebg (bg for backgrpund, ama asalka, Ingiriisi) in aan halkan u isticmaali doono. Adeeggani wuxuu gebi ahaanba ku qoran yahay Ingiriis, laakiin waa mid aad u fudud in la fahmo, gaar ahaan marka wax walba si dhakhso ah loo sameeyo, dhowr ilbidhiqsi. Kaliya soo dir sawir leh sheyga aad rabto inaad wax ku geysato.
Raadin sahlan oo leh Bixinta
Kombiyuutarkaaga - kaniinigaada ama smartphone - furo boggaaga internetka oo tag goobta Removebg.
Si aad u soo dirto sawir ku kaydsan kombuyuutarkaaga ama qalabka mobile, riix badhanka cagaaran "Dooro sawir ". Daaqada qaabka faylka caadiga ah ayaa u muuqda - way kala duwan tahay iyadoo ku xiran nidaamkaaga hawlgalka - waana inaad kaliya kuxirisid dhexdhexaadintaada kaydka si aad u doorato sawir si loo farsameeyo.
Markaad xaqiijiso, faylka si toos ah ayaa loo soo diraa ("uploaded" in qalad ah erey) iyo barmaamijka horumarinta ayaa loo soo bandhigaa si loo muujiyo horumarka daaweynta.
Ka dib dhowr ilbidhiqsi - wakhtigu wuxuu ku xiran yahay hadba siduu u ekaado iyo kakanaanta sawirka - laba sawir ayaa lagu soo bandhigaa dhinaca dhinaca: bidixda, lafdhabarta, midigta, dhinaca midigta, natiijada xoqista.
Ogsoonow in Remove.bg si fiican u shaqeeyaa: wuu ogyahay sida si wanaagsan loo xoqo timaha - hawsha adag ee lagu gaari karo gacanta - iyo xitaa tirtirida hoosta "meelaha ciriiriga ah" - sida gacanta gacmaha.
Haddii aad ku qanacsan tahay, riix calaamada "Download" ee cagaaran si aad u hesho sawirka. Taasi waa dhan!
Functions si loo nadiifiyo xoqista
Algorithms of Remove.bg waa arrin aad u xoog badan iyo, xaaladaha badankood, natiijadu waa wax aan caadi ahayn laga soo bilaabo tallaalka kowaad.
Si kastaba ha noqotee, haddii sawirku aad u adag yahay, ama haddii natiijadu aysan ku qanacsaneyn, waxaa suurtagal ah inaad sameysid qaar riixaya.
Si arrintan loo sameeyo, guji badhanka "Edit" yar oo ku yaal sawirka wax lagu shaqeynayo.
Daaqad ayaa u muuqata sawir-goosasho iyo qalab aad u fudud oo dhinaca midigta ah.
The "sawir" aagga in diyaarad ugu horeysay, waa in la yidhaahdo, element cutout ah. Waxaad haysataa qalab xanjo oo kale ah ( "masixi") si aad u nadiifiso meelaha iyo inta ay "Soo Celinta" si arkaa meelaha tirtirayaa by lafdheerta (dambeeya qorshaha asalka ah).
Riix badhanka doorashada adiga oo raacaya isbeddelada aad doonayso inaad samayso, ka dibna hagaajiso xajiyaha toosan ee hoose si aad u hagaajiso dhumucda "line" ee qalabkaaga (ka yar bidix, ka sii weyn dhinaca midig).
Kadibna dhaqdhaqaaqa u dhaqdhaqaaqa meelo kala duwan adigoo riixaya badhanka bidix. Iyada oo ku xiran goobtaada, waxaad arki doontaa meelaha muuqda ama baaba'aya.
Ogsoonow inaad sidoo kale leedahay sawir xagga hoose ee daaqada si aad u hagaajiso sawirka korriinsho iyo si farsamo leh uga shaqeyso faahfaahinta. Ku shaqee! Riix gujis ah oo ku saabsan tusaha tilmaamta boqolkiiba boqol, waxaadna ku laabaneysaa 100%.
Haddii ay dhacdo qalad, ha argagixin: riix badhanka "Undo" badhanka hoose ee daaqadda si aad u tirtirto manipulintii ugu dambaysay - xitaa waxay la shaqaysaa heerar kala duwan, si aad u tirtirto xoogaa isdaba-joog ah.
Haddii aadan jeclayn, riix batoonka "Reset", oo ku xigta, si aad u hesho qalabkii hore.
Si ka fiican, qaybta hoose ee daaqada edebta ("Background") waxay u oggolaaneysaa sawir-qaadashada sawirrada dhowr jeer. Dhab ahaantii, waxay suurtogal u tahay in si sahal ah loogu dabooli karo qaybta cutubka ee asalka ah (asalka). Si taxadar leh, si kastaba ha ahaatee, suurtagal ma ahan inaad u guurto ama dib u soo ceshato qalabka: waa sawir dabiici ah.
Laba nooc oo asal ah ayaa la soo jeediyey: asalka iyo muuqaalka guud.
Si aad u daboosho asalka midabada, guji badhanka "Color". Midabada midabka ayaa u muuqda.
Riix banner midabka hoose ee hoose si aad u dhigto codka guud, ka dibna ku nadiifi hutarka adigoo u wareegaya wareegtada laydhka midab leh. Haddii aad rabto, waxaad isticmaali kartaa nambarada la soo jeediyey ee hoose ee hoose, ama xitaa gacanta ayaa tilmaamaya qiimaha hexadecimal ee ku haboon.
Markaad ku qanacsan tahay, riix "OK".
Si aad uqoro sawir asal ah, guji badhanka "Photo". Kadib waxaad dooran kartaa mid ka mid ah sawirada aan kala sooc lahayn - taas oo isbedeleysa xiriir kasta - ama dooro faylasha ku kaydsan kombiyuutarka adiga oo gujinaya "Xulashada Sawir".
Daaqad doorasho oo caadi ah ayaa la furaa, taas oo kuu oggolaaneysa inaad ku dhex gasho geedkaaga, iyo sawirka waxaa lagu soo rogaa isla marka la doorto. Mar labaad, riix "OK" markaad samaysay doorashooyinkaaga.
Markaad ku qanacsan tahay natiijada, riix batoonka "Badbaadi" si aad u soo qaadatid kuraastaada.
Caqabadaha iyo xaddidaadyada Ka-reebista
Sida wax ku ool ah oo wax ku ool ah sida ay tahay, Extract.bg waxay ku xireysaa caqabadaha qaarkood waxayna leeyihiin xadidaad.
Si aad u bilowdo, waxay aqbalaan sawirada qaababka caadiga ah (Jpeg, PNG, iwm.), laakiin kaliya waxay abuurtaa sawirrada PNG (oo leh daahfurnaan).
Intaa waxaa dheer, haddii ay aqbasho sawirada cabbir kasta, waxay abuuraysaa sawirrada "miisaamaya" inta badan 0,5 megapixel (tusaale ahaan, mid ka mid ah 625 × 400 pixels). Qeexitaan aan ku filneyn oo lagu fulinayo shaqada xirfadeed, ama xitaa si aad u samayso daabacaad balaadhan oo sawir-qaadis ah. Hase yeeshee, tani waxay ku filan tahay inay hesho muuqaal ay ku waydiiso shabakad bulshadeed ama soo daabacdo casuumaad gaar ah, tusaale ahaan.
Waa in la ogaadaa, si kastaba ha ahaatee, in xaddidaaddan xajmigani kaliya ay khuseyso kaliya qaybta bilaashka ah ee "Remove.bg". Dhab ahaantii, goobta ayaa sidoo kale bixisa adeeg-lacag-bixin, kaas oo awood u leh soo saarida sawirro sare-qeexaya illaa 10 megawaxels.
Ugu dambeyntii, waa in la xusuusnaadaa in xayiraadda otomaatikada aysan weligeed noqon mid wanaagsan sida qalabka xajinta ee ay sameeyeen khabiir ku shaqeeya software sida Photoshop ama Gimp. Sawirro isku dhafan, sida maadooyinka qaarkood, waxay ubaahanyihiin ogaansho dhab ah- sida xiriir la leh qalabka awoodda leh. Oo hadday soo saaraan sawirada sawirrada fudud, halka mawduucuna yahay mid si cad u muuqda, iyada oo aan laheyn wax badan oo hoosaadyo ah, ma beddeli karo indhaha aadanaha. Tani kama horjoogsanayso in ay aad u faa'iido badan tahay si sahlan oo sahlan, gaar ahaan maaddaama ay aad u sooman tahay.
Tilmaamaha: © PXhere - Ka bixid